Indawo yokutshona kwelanga
Igumbi lakho lokulala e indawo yokuhlala nenesidlo sakusasa sinombuki zindwendwe onguSandi
Lo ngumhlobo, umema, i-suite enesango labucala elibonelela ngeendlela ezahlukeneyo zokuthuthuzela.
Buyela umva kwi-recliner, uzisonge kwi-rocker yesitulo sothando okanye uphephe imiqamelo kwaye ujonge kuthotho lwakho lwamva nje lweNetflix.
Ikhitshi likwavulekile, libucala kwaye linendawo yokusebenzela.
Indlu ihlanjululwe nge-UV kunye ne-Ozone Sterilization phakathi kweendwendwe, kunye nazo zonke iindawo zoqhagamshelwano.
Sifuna iindwendwe zethu ziqiniseke ngala maxesha anzima.
Ngasemva kwamanye amaphepha? Akukho maxhala, kukho indawo yokusebenzela eyaneleyo kunye namazibuko okutshaja ukubamba “eofisini” phambi komsitho ophambili.
Igumbi lokulala linendawo yokuhlala kunye nekhitshi elahlukileyo lokukhusela i-munchies. Yonwabela itafile kabini okanye utsale izitulo zebar kwaye uzincede kwikofu entsha eselwayo, i-oatmeal, iipastries, iyogathi, amaqanda abilisiwe amatsha (ngesicelo) kunye neentonga zamasi.
Kuhlala kukho amanzi asebhotileni kwifriji kwaye ngokuqinisekileyo i-microwave isoloko iluncedo.
Sibonelela ngazo zonke izixhobo zetafile onokuthi uzifune kunye neketile yombane yamanzi ashushu ngoko nangoko.
4.97 · Izimvo eziyi-130
Umalunga nemizuzu esi-7 ukusuka edolophini, kumgama wokuhamba weFairgrounds, kunye nemizuzu emibini yokuqhuba ukusuka eStarbucks, iBlue Palm Frozen Yogurt, iSafeway, iWalgreens, iStone Hut, kunye neentlobo ngeentlobo zezinye iindawo zokutyela kunye nokusekwa kokutya okukhawulezayo.
Kwisithuba seemayile ezintathu ukusuka kolu kuzimela, uya kufumana intaphane yeewayini ezilinde utyelelo lwakho kwaye kuthatha imizuzu esi-8 ukuya kwiKholeji.
Umbuki zindwendwe ngu- Sandi
Sihlala sikulungele ukuphendula imibuzo yakho, ukunika iingcebiso ezinobubele okanye silungiselele intuthuzelo yakho. Umbhalo okhawulezayo, umnxeba okanye unkqonkqoze kumnyango wethu, lithuba lethu lokuba senze ukuhlala kwakho kube mnandi ngakumbi.
Sihlala sikulungele ukuphendula imibuzo yakho, ukunika iingcebiso ezinobubele okanye silungiselele intuthuzelo yakho. Umbhalo okhawulezayo, umnxeba okanye unkqonkqoze kumnyango wet…